Home Home Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo Khudbad u jeedinaya labada Gole...
Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo Khudbad u jeedinaya labada Gole ee Baarlamaanka Somaliya
Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, ayaa lagu wadaa inuu Khudbad u jeediyo labada Gole ee Baarlamaanka Somaliya, kadib kulan gaar ah oo maanta ka dhacaya Magaalada Muqdisho.
Xildhibaanada Golaha Shacabka & Golaha Aqalka Sare ee dalka, ayaa lagu wargeliyay inay soo xaadiraan kulankaan gaarka ah ee ka dhacaya Xarunta Dugsiga tababarka Ciidanka Booliska ee Jeneraal Kaahiye oo ku yaallo Degmada Xamar Jajab.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan Golaha Shacabka Somaliya, ayaa Warbaahinta u sheegay in Xildhibaanada lagu wargeliyay soo xaadirista kulanka Khudbad jeedinta Madaxweynaha dalka Jabuuti.
“Waxaa farriin Xoghaynta Golaha Shacabka ay ina soo gaarsiiyeen in maanta labada Gole ay isugu imaanayaan ka qayb galka kulanka gaarka ah ee Madaxweynaha dalka Jabuuti uu Khudbad ka jeedin doono, mowduuca ayaa naloogu sheegay Kalmad jeedinta Madaxweynaha dalka Jabuuti.” Ayuu yiri Xildhibaan Dalxa.
Kulankan gaarka ah ee labada Aqal maanta Khudbada uu ugu jeedinaayo Madaxweynaha dalka Jabuuti, ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo uusan wali furmin Kulamadii Golaha Shacabka & aqalka Sare ee dalka.